Recipe Candy Ovy Ovy - Fety
inona no mandeha tsara amin'ny salady ovy
inona no hatao amin'ny salady caesar akoho
voatavo voatavo voatavo miaraka amin'ny siramamy mena sy kanelina
tsaramaso fotsy lehibe any avaratra
Recipe Candy Ovy Ovy
Ny Candy Ovy Irlanda dia voanio voankazo matsiro namboarina tamin'ny kanelina (tsy ilaina ny fanaova).
mitovy ihany ny tendron'omby sy henan'omby
Na dia antsoina hoe vatomamy ovy aza ireo dia tsy misy ovy ary tsy Irlandey izy ireo. Ny anaran'izy ireo dia avy amin'ny fisehoany ovy.
Ny vatomamy ovy Irlandy dia malaza amin'ny andron'i St. Patrick na dia tsy Irlandey aza (novokarina tany Philadelphia izy io). Ary na dia azonao atao aza ny mividy itony fitsaboana itony dia mora be ny manao ao an-trano.
BASE Ny fototr'io fitsaboana io dia ny fifangaroan'ny fromazy fanosotra sy dibera mamy misy siramamy vovoka.
tsirony Ny voanio dia tsy vitan'ny hoe manampy firafitra fa manampy tsiro miaraka amin'ny lavanila.
COATING Ireo dia mihorona ao anaty sarina kanelina izay manampy tsiro sy zava-manitra mafana. Raha tianao kokoa dia azonao ahodina ao anaty kakao izy ireo.
Mamy ireo, vatomamy izy ireo ka natao ho mamy. Raha te hampihena ny hamamin'ny sasany ianao dia ampiasao voanio tsy mamy.
Raha tena malefaka ny koba dia ampidiro anaty vata fampangatsiahana kely alohan'ny ahodina.
Raha miraikitra loatra ny koba dia ampio voanio kely kokoa.
Izahay dia mamolavola azy ireo ho lasa baolina kely fa azonao atao ny mamolavola azy ireo somary boribory somary lavalava kokoa hitovy amin'ny ovy raha tianao.
Arovy ao anaty vata fampangatsiahana ireo hatramin'ny 2 herinandro na ao amin'ny vata fampangatsiahana hatramin'ny 3 volana.
Bebe kokoa amin'ny fetin'ny St. Patrick's Favorites
Omby sy laisoa katsaka
Recipe Colcannon (laisoa sy ovy)
Ny tiako indrindra Ruby Sandwich
Candy vatomamy ovy
Fotoana fanomanana25 minitra Fotoana fandrahoan-tsakafo0 minitra Fotoana manontolo25 minitra Fanompoana30 vatomamy MpanoratraHolly Nilsson Fitsaboana voanio mamy voasarimakirana izay voahodina amin'ny kanelina. pirinty Pin
▢4 ounces fromazy fanosotra nihanalefaka
▢⅓ kapoaka dibera nihanalefaka
▢4 kaopy siramamy confectioners
▢1 sotrokely fitrandrahana lavanila
▢2 ¼ kaopy voanio
▢1-2 tablespoons havozomanitra
Mampiasà crème mixeur miaraka ny dibera, fromazy fanosotra ary ny fitrandrahana lavanila.
Asio siramamy vovoka miadana ao anaty lovia ary tohizo mandra-pahatongan'ny atambatra dia manana koba matevina ianao.
Mampiasa sotro hazo ary afangaro amin'ny voanio.
Makà kely ny koba eo an-tananao dia ahodino ho lasa baolina manodidina ny marbra.
Apetraho ao anaty lovia kely ny kanelina ary ahodino ny baolina ho palitao.
Manompo:1vatomamy,Kaloria:136,Karbohidraty:18h,Proteinina:1h,Tavy:7h,Tavy voky:6h,Trans Fat:1h,Cholesterol:10levitra,Sodium:33levitra,Potasioma:42levitra,Fibre:1h,Sugar:16h,Vitamina A:115IU,Vitamina C:1levitra,Kalsioma:9levitra,Vy:1levitra
Teny lakileCandy vatomamy ovy Mazava ho azytsindrin-tsakafo masakaMalagasy© SpendWithPennies.com. Voaaron'ny zon'ny mpamorona ny atiny sy ny sary. Ny fizarana an'ity fomba fahandro ity dia sady amporisihina no ankasitrahana. Voarara tanteraka ny maka tahaka sy / na mametaka ny fomba fahandro feno amin'ny media sosialy. Azafady zahao eto ny politikako momba ny fampiasana sary .
ronono marihitra mamy vita amin'ny caramel